Yiya esidlangalaleni, ukuguqula ukuhlanganisa, iinkampani zoShell zikaRhulumente ezifumanekayo
Uhamba njani esidlangalaleni- IPO, Reverse Merger, kunye neeShells zikaRhulumente
Ukuya esidlangalaleni yinkqubo yokuthengisa izabelo zestokhwe, ezazifudula zibanjwa ngasese, kumalungu oluntu ngokubanzi. Inkqubo inzima, ilawulwa kakhulu kwaye inezibonelelo ezininzi, ithatha inkampani yakho esidlangalaleni:
Inceda ukuba uyikhulise inkampani yakho ngokukhawuleza ngokubonelela ngezixhobo ezongezelelweyo zemali.
Ikunceda utsala kwaye ugcine abantu abangaphezulu-phezulu benemivuzo efanelekileyo (ngokukhetha isitokhwe).
Khulisa inkampani yakho ngokukhawuleza ngokutsala ulwazi olunolwazi, ibhodi yabalawuli.
Nyusa imali ngokukhawuleza nangeendleko ezingaphantsi.
Kwandisa ukuthengiswa kwakho kunye nabatyali mali bakho.
Ikhulisa imali kwaye yenze isitokhwe esithengiswayo esinokusetyenziselwa ukufumana ezinye iinkampani kunye nokwenza ubuchule kunye nezinye iinkampani.
Yonyusa izinga lokukhula kwakho ngokwandisa amandla akho okhuphiswano lweekhontrakthi ezinkulu.
Ngaba ungalinyusa ngokukhawuleza kwaye ubonelele ixabiso lenkampani yakho.
Uhambisa utyalo-mali lwakho kwishishini lakho ngokwenza lixabiseke ngakumbi, ngaloo ndlela ukwandisa i-ROI yakho yobuqu.
Yonyusa imeko yeshishini lakho ngokwenza ukuba kube lula ukutsala ishishini elitsha.
Ukuba sele unenkampani kawonkewonke sinokukunceda ukwandisa ixabiso lenkampani kunye nenzuzo kwaye sikuncede ukhusele iiasethi kumatyala.
Gcinga ezingqondweni; ayisiyokunyusa imali kuphela. Ikwa malunga nokuqiniseka ukuba
inkampani iqhutywa kakuhle kwaye ilawulwa. Ii-CEO eziphezulu zisebenzela izibonelelo ze-
abanini zabelo. Gcina umdla wabo uphezulu engqondweni kwaye baya kuyibona injongo yakho kwaye abantu abaninzi baya kutsala umbutho wakho. Yimbono yexesha elide ebaluleke hayi eyokudubula ngexesha elinye. Uya kudinga iqumrhu elilungelelaniswe ngokufanelekileyo, isicwangciso seshishini esivakalayo kunye nabantu abanolwazi ukuze basenze. Nokuba use-US, Germany, China, Canada okanye kwenye indawo, funa uncedo kuthi.
Ufuna ntoni ngoncedo?
Ngaba uyafuna ukwandisa ukuthengisa kwakho?
Ngaba kufuneka ugcine iindleko ziphantsi?
Ngaba uyafuna ukufumana amanye amashishini kwaye kufuneka ufumane abagqatswa abafanelekileyo?
Ngaba ufuna isicwangciso seshishini esingcono?
Kuthekani ngentengiso kunye nentengiso? Dinga uncedo?
Ngaba ufuna inkqubo elungileyo yenkxaso kunye noluhlu lwabantu abanolwazi?
Kuthekani ngokuzikhusela kubantu "abafutshane" kwisitokhwe sakho?
Ngaba ufuna ukwenza ishishini kunye neenkampani ze-S & P 500?
Ngaba ufuna ukufumana igama lakho phaya eluntwini ngendlela engabizi kakhulu?
Ngaba ufuna ukuphuma kwimakhishithi epinki kwaye uye kutshintshiselwano olukhulu?
Nantsi indlela yokuqalisa
Kukho amalungiselelo apho ungayifumana imali kwinkqubo "yokuya esidlangalaleni."
I-Visa, MasterCard, American Express kunye neDisco nazo zamkelwe.
Inkqubo inokukunika ukufikelela kwimali mboleko yokutyikitya eyi- $ 50,000 kusuku olunye (kuxhomekeke kwimvume yomboleki) kwaye,
Imali-mboleko enkulu kakhulu ngokuxhomekeke kwiiasethi kunye nokuhamba kwemali ukuba umsebenzi wakho uphezulu kwaye
Kwiimeko ezininzi, sinokulungiselela ukuba iVenture Capitalists ixhase inkqubo yokuya esidlangalaleni ngokuxhomekeke kwimbono yenkampani yakho.
Nje ukuba uthathe inkampani yakho esidlangalaleni kukho lonke iqela lokudlulisa esilungiselele ukukhulisa inqanaba lakho lempumelelo. Kukho abantu esinobudlelwane obude nabo sibasebenzisayo okanye esinokuzisebenzisa buqu kwaye senze kakuhle kwezinye iinkampani. Nalu uluhlu olukhethiweyo:
Iiarhente zentengiso ezaziyo ezona ziphumo zibalaseleyo ngexabiso eliphantsi.
Iingcali zokudityaniswa kokufunyanwa
Abo banokukunceda uphuhlise ukujongana namashishini kunye neenkampani ze-S & P 500
Sibe kwiShishini ngaphezulu kweminyaka eli-100
Amava abalwa. Ukuya esidlangalaleni yinkqubo elawulwa kakhulu. Ke, ufuna ukuxhomekeka kwabo bakuncedayo. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba bayayazi i-ins kunye nokuphuma kwenkqubo ngamava amakhulu. Iqela lethu ligxile ekusebenzeni ngaphakathi kwemida yezokhuseleko kwaye lenze indlela enxibe kakuhle ekunikezeleni ngokukhawuleza nangempumelelo.
Nazi izibonelelo zomntu ogqiba kwelokuba aye esidlangalaleni:
Ikhupha imali enkulu kunye nokuhlawula amatyala
Yonyusa ixabiso leshishini.
Kulula kakhulu ukunyusa imali xa unenkampani yoluntu.
Unokusebenzisa isitokhwe ukuhlawulela iinkonzo ezinje ngentengiso, ukukhuthaza imveliso, nezinye
iinkonzo kunye nesitokhwe sezinye iinkampani.
Kulula kakhulu ukufumana ezinye iinkampani - ngokuthenga inkampani enesitokhwe.
Iindaba Malunga nokuya kuLuntu
Umnikelo kaRhulumente oThe ngqo (DPO) unokuba neenzuzo ezibonakalayo ngaphezulu kwe-IPO. Nge-IPO umntu kufuneka abhengeze ukuba ingakanani inkampani eza kuyinyusa ngokuthengisa izabelo. Ukuba loo mali ayinyuswanga, umnikelo awunakugqitywa. Nangona kunjalo, nge-DPO azikho izithintelo ezifanayo kwaye kukho ukuguquguquka okungakumbi kuba awunyanzelekanga ukuba unyuse inani lemali oyicebisayo kumnikelo wakho njengoko ubuya kufuneka kwi-IPO.
Ke, ukuba ucwangcisa okanye ucinga ngokuya esidlangalaleni, kwaye ufuna ukwazi ngakumbi malunga nendlela esebenza ngayo inkqubo yobhaliso lwe-SEC, kubandakanya iqokobhe loluntu okanye ukubuyisela umva ukudityaniswa, gcwalisa ifom ekunene kwaye umntu othile uya kuxoxa ngale nto nawe. Siyabona ukuba ufuna kangakanani na xa ufuna ukuqala ukukhulisa imali. Buza malunga nokuba ungaya njani esidlangalaleni kwaye ubuze malunga nokudityaniswa okungafaniyo. Uncedo luyafumaneka kwiimemorandam zokubekwa zabucala (PPM) ngokunjalo
ukufumana imali eyimbewu, imali yokuqalisa, abenzi beemarike, iinkampani zeqokobhe kunye nendlela yokuthatha inkampani yakho esidlangalaleni. Ulwazi malunga nendlela yokunyusa imali njengenkampani yoluntu ngokusemthethweni nangokokuziphatha ikwabonelelwe.
Xa wonke umsebenzi ugqityiwe, ishishini lakho linokuya eluntwini kwaye ishishini lakho liya kuthi, ngenxa yoko, libe yinkampani yoluntu. Sikuthatha ngesandla kwaye sihamba kwinqanaba lenkqubela-phambili ngenyathelo ngenkqubo yokuba yinkampani ethengisa esidlangalaleni. Abasebenzi bethu benkxaso yeengcali banokukugcina uhlaziywa malunga nendlela yokwenza ukudibanisa okungafaniyo kunye nenkampani yeqokobhe ethengisa esidlangalaleni. Umntu unokuya esidlangalaleni ngokudibana okungafaniyo nenkampani yeqokobhe loluntu. I-DPO, nangona kunjalo, ihlala ikhethwa ngabantu abaninzi.
Yiya esidlangalaleni ngokuKhuthaza okufanelekileyo kunye noBudlelwane babatyali mali
Ubudlelwane obufanelekileyo babatyali zimali banenzuzo, izizathu zomthetho, kunye noxolo lwengqondo. Ke, inkampani yethu inokukunceda ukuba unxibelelane ngokufanelekileyo nabatyali mali kwaye ubhengeze isitokhwe. Ngokungafaniyo neenkampani zabucala, inkampani kawonke-wonke efayilishwe ngokufanelekileyo ngoku inokubhengeza ukunikezela ngokuthe ngqo kuluntu.
Ngenkampani yakho yoluntu sinokukunceda uthathe uxanduva kunye nokunyusa imali eyimfuneko kwishishini lakho ngokukhawuleza nangokusemthethweni.
Sinokukunceda ukuba ukhuthaze ishishini lakho kubaphulaphuli abakhulu kunangaphambili.
Unokuthengisa isitokhwe ngeenkonzo zentengiso. Emva koko unokusebenzisa le ntengiso simahla kwaye uyisebenzise ukwazisa umhlaba ukuba uyinkampani kawonkewonke. Abantu abaninzi baya kwazi ngawe ukuze abantu abaninzi bathenge kuwe. Oku kuyakukunceda ekuqhubekeni kwakho nokunyusa imali kuba abatyali mali abaninzi baya kuyazi inkampani yakho ukuba iyafumaneka ukuze ithengiswe.
Inkqubo yoLuntu yokuHamba
Uninzi lwabantu aluqhelananga nendlela yokuya esidlangalaleni. Ke, siyenza lula. Amabinzana anjengokunikela ngokuthe ngqo kuluntu, umnikelo wokuqala woluntu uqhelekile kodwa bambalwa abaziqhelileyo iinkcukacha zendlela yokufika apho. Yintoni umenzi wentengiso? Ukwenza njani okungcono ukudityaniswa okungaguqukiyo? Ukunyusa inkunzi? Yenza iqumrhu leqokobhe loluntu? Leyo yimibuzo esiyiphendulayo kwaye ezi ziinkonzo ezinokubonelelwa emva kokufowuna.
Elinye lamanyathelo okuqala kukugcwalisa ifom yobhaliso ye-S-1 kwaye uyigcwalise nge
Ikhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano (i-SEC). Nje ukuba bakwamkele ukufayilwa, amaxwebhu agcinwa kwi-FINRA, iGunya loLawulo lweMizi-mveliso. Izinto eziphambili ngokubaluleka kunye neenkqubo kunye neenkqubo ze-IPO kunye neze-DPO ziya kusingathwa ngendlela yobungcali kunye neenkqubo zoluntu zokudityaniswa kwegobolondo, umthetho we-15c211 wokugcwalisa kunye nefom 8-K. I-EDGAR, emele ukuQokelelwa kweDatha ye-elektroniki, uHlaziyo, kunye nokuFowunelwa kugqityiwe ngokufanelekileyo ukuze inkampani yeqokobhe loluntu yenziwe, ukudityaniswa okuphambeneyo kwenzeka ngokufanelekileyo kwaye imali yokuqala okanye imali yokukhula inyuswe ngempumelelo.
Njengoko besitshilo ngaphambilana kwinqaku, indlela ekhethwayo ihlala i-DPO (ngokuthe ngqo ukuNikezelwa koLuntu). Nxibelelana kwaye sinokunikezela ngolwazi olusimahla malunga nesi sihloko kunye nendlela yokwenza ukudibanisa okungafaniyo nenkampani yeqokobhe loluntu. Ke, unokufunda ukuba ungayithatha kanjani inkampani yakho esidlangalaleni ngaphandle kweendleko zesiko. Ngapha koko, unokufumana iingcebiso malunga nokuba ungayithatha njani inkampani yakho esidlangalaleni kwaye kutheni kulula kakhulu ukunyusa imali usebenzisa inkampani yoluntu ngokuchasene neyabucala.
Ukunyusa isitokhwe sakho-Akukho nto ilunge ngakumbi kunendaba elungileyo
I-IPO elungileyo imalunga nokuthengisa ibali lakho. Ngokusisiseko, ukuthengisa okuhle kuhlala kulungile
ukubalisa, awuvumelani? Elinye lamanyathelo okuqala kukusebenza iintsuku ezimbalwa ebalini. Yisebenzise ngabanye abantu. Emva koko, endaweni yokuqhubela phambili malunga neengcinga ezifanayo ezindala, qhubeka uhlaziya ibali lakho. Abantu bathenga ngeemvakalelo kwaye bazithethelele ngezigqibo zabo ngengqiqo. Qiniseka ukuba ubandakanya zombini ukuqonda okunengqiqo okunengqiqo kunye nobunzima beemvakalelo obenza ukuba iimolekyuli zabatyali zimke. Xelela ibali eliya kwenza abantu bathethe.
Elona bali libalaseleyo
Linye kuphela ibali elinokulixelela iqela labatyali mali be-IPO: Inkampani yakho iza kubenza njani imali ethe kratya kunomntu olandelayo? Uninzi lwamagosa adibeneyo kunye namalungu ebhodi amaninzi asetyenziselwa ukubonisa abathengi. Kodwa, gcinani engqondweni, ukuba kubalulekile ukuba umthengi azi kwaye yintoni umtyali mali afuna ukuyazi ihlala yahlukile. Ke, ukongeza ekuthetheni ngeemveliso zakho kunye nento onokuyenza ngayo, xa uthetha nabatyali mali, thetha nge-ROI yabo.
Ubhala eli bali
Unokufumana uncedo, kodwa ekugqibeleni, ibali kufuneka libhalwe nguwe. Lo ngumsebenzi we-CEO okanye we-CFO. Ukuphinda, abantu bathenga ngeemvakalelo kwaye bathethelele ukuthengwa ngengqondo. Ke, ukuba ibali linengqiqo kwaye livela entliziyweni yakho, linentsingiselo enzulu kwaye iyinyani kuwe, abaphulaphuli bakho bayakuqonda oku, banokushukunyiswa ngokwasemoyeni ukuba benze, kwaye banokuthethelela ngokulula isigqibo sabo.
Sisebenze neenkampani ezimbini ezazikho zombini kushishino lobuchwephesha. Enye ye-CEO yatshisa ioyile ezinzulwini zobusuku ilungiselela intetho ebonakalisa umdla nesuka entliziyweni. Umphathi omkhulu wenye inkampani wenza ukuba abantu abathengisayo benze intetho. Iminikelo yaziswa kwaye yaxabisa usuku lodwa. Eyokuqala, apho umphathi we-CEO wayenentliziyo yakhe kwintetho, waya ngaphezulu kwexabiso eliqikelelweyo. Elesibini lahlala emazantsi. Kukho isizathu esihle soku.
Ukuba ukhe wazibona iinzame zokuqala kumdlalo weTV "iAmerican Idol," apho iijaji zibona omnye ecula emva komnye, ubonile ukuba uSimon Cowell uyacaphuka xa umgqatswa engena enxibe isinxibo okanye esebenzisa enye into. Bajonge italente hayi ihypes.
Abatyali mali bamaziko bayafana. Banokubona izindululo ezitsha ukuya kwezilishumi zotyalo-mali yonke imihla yeveki. Bazibonile zonke. Emva kwethutyana baba ziingcikivo kwaye bathandabuze kwaye kufuneka bahlele amatye amaninzi angabalulekanga ukufumana oombane begolide. I-Phony hyperbole ayincedi. Isitshixo yimizuzu embalwa yokuqala yokubonisa. Kulapho uninzi luya kuthatha isigqibo. Phantse ngokubaluleka yimizuzu eli-10-15 yokugqibela ngexesha lesigaba semibuzo neempendulo. Abatyalomali bafuna ukubona ukuba ubambelela njani xa izimvo zakho ziphikiswa kakhulu.
Nanku umbuzo ubuzwa yonke iCEO endleleni: “Yintoni eyona inkulu kuwe
umceli mngeni? ” Ngamanye amagama, "Yintoni ekugcina usebusuku?" Eyona ndlela yokuphendula kukuvuma iingxaki zakho kwaye wazise abaphulaphuli ngento oyenzayo ukusombulula iingxaki.
Inkcazo-ntetho yakho iyi-45 yemizuzu. Yiyo kuphela into onayo. Ke, yeka ibhombu kwaye ubanike owona mboniso wakho mhle kwimizuzu emithathu yokuqala. Oko kuyakwenza ukuba bafune ukuhlala phantsi kwaye bathathe ingqalelo kwi-42 elandelayo. Kutheni wahlukile?
Nanku umzekelo olungileyo. Umphathi omkhulu wenkampani eyile irobhothi yokucoca umgangatho wayethetha neqela labatyali zimali ngoluhlobo: “Makhe ndiqale intetho yakhe ngombuzo, Bangaphi abantu apha abakhe bacoca umgangatho?” Wonke umntu uphakamise izandla. “Bangaphi kuni abathanda ukuyenza?” Akukho zandla ziphakanyisiweyo. “Njengakho, wena, kukho izigidi zabantu kwihlabathi jikelele abangakuthandiyo ukucoca imigangatho yabo. I-ABC Robotics inemveliso yokusombulula le ngxaki. ”
Sinokukunceda kwizinto zamva nje malunga nenkqubo ye-IPO (yokuQala yokuNikezelwa koLuntu), ukubuyela umva kokudityaniswa, Umthetho 15c211, Ummiselo D, ukuya kwiigobolondo zikawonkewonke. Ukongeza, nxibelelana nathi ngolwazi kwiiMemorandam zokuBekwa kwaBucala (PPM), Umthetho 504, Umthetho 506, ukunyusa imali kunye nokuqalisa kwemali, ukukhuselwa kwempahla kumatyala, kunye nokwenziwa kwenkampani entsha eMelika nakwamanye amazwe.
Kukho ubugcisa kuyo. Ukunyusa imali enkulu kunokuba ngumdlalo maze. Sinemaphu. Funda ukuba kwenzeka ntoni xa inkampani ihamba esidlangalaleni kwaye ubone ukuba ingakunceda njani.
Uya kufunda ngakumbi malunga nokuba inkampani ihamba njani esidlangalaleni kwaye uya kuziva ukhululekile ukuthatha isigqibo malunga nendlela eyiyo. Ke, ngolwazi oluthe kratya kunye neenkcazo kunye namanyathelo okujongana nokuphinda ubumbane, ukudityaniswa kweqokobhe loluntu okanye ukunikezelwa ngokuthe ngqo koluntu (DPO), tsalela inombolo ephezulu kweli phepha. Ngokwendalo, akukho lwazi luqulathwe apha oluya kuthathelwa ingqalelo njengezomthetho, zerhafu okanye ezinye iingcebiso zobungcali. Ukuba ziyadingeka iinkonzo zegqwetha elinephepha-mvume kunye / okanye umgcini zincwadi kufuneka kufunwe.
Xa ulungele ukuya esidlangalaleni, qhagamshelana nathi. Besisoloko sisebenza ukusukela nge-1906 kwaye saziwa kwihlabathi liphela njengeenkokeli ekwakheni inkampani nasekuhleni.